Kuze kube manje, inkinga yengane yokudakwa ngokweqile kakhulu. Umzimba wengane unezici zawo futhi ngakho-ke ungaba umlutha wotshwala ngokushesha. Ngokwezibalo, ukuphuza utshwala phakathi kwabantwana abangaphansi kweminyaka yanda ngonyaka.
Ngokuvamile, inkathi yengane kanye nentsha ngezinye izikhathi ukutholakala kolwazi olusha, amakhono, lapho ukuhlanganiswa kokugcina komuntu ngamunye, kwembula ukuma kobuchwepheshe. Ngalesi sikhathi, ingane noma intsha ifunda ngokujulile imigomo yokuziphatha, iyakuthola emphakathini wendawo ezungezile. Kubi uma izindinganiso zokuphila nezindinganiso ezizungezile ingane zihlanekezwa, ngoba uyazamukela, bese uziqeda akulula. Umzimba wengane ngokushesha uvumelanisa nezinguquko ezimweni zokuphila kwakhe. Konke lokhu kusebenza ekudakwa ngokweqile. Ukuze uqhathanise, ukuze umuntu omdala abe umelana nokulinganisa okukhulu kotshwala futhi wakhe ukuthembela kotshwala, iminyaka kumele idlule. Endabeni yomzimba wengane, izinyanga ezimbalwa nje zanele.
Izimbangela zokudakwa ngokweqile ezinganeni
Ukuxhomekeka kokudakwa kotshwala ezinganeni nasebancane kuvela ngezizathu ezihlukahlukene. Isibonelo esiyinhloko isibonelo sabantu abadala. Emkhayeni lapho ingane ikhula khona futhi abazali bephuza, ngokuhamba kwesikhathi abantwana baqala ukubona ukudakwa njengokujwayelekile, bese bezama ukuphuza utshwala. Ezingxenyeni zamacala, izidakamizwa ezidakayo zazala futhi zakhulela emindenini yezidakayo. Ngokuvamile isizathu sokusebenzisa utshwala ngokweqile yizingane yibo abadala, abaqala ukuphuza utshwala ukuzama ukubheka ingane yabo.
Esinye isizathu sokuhlukumeza izingane nentsha yeziphuzo ezidakayo zikhona emfundweni engafanele emndenini. Ochwepheshe bahlukanisa izizathu ezimbili ze-polar: ukunganakekelwa kanye ne-hyperope. Ukwehliswa kwemvelo kusho ukuziphatha kwabazali abanozwela okukhona lapho kukhona ukungcola okuphelele kwengane. Abantu abadala bazama ukusindisa isilwane sabo kusuka ezinkingeni zokuphila. Kulesi simo, umntwana okhulisa abamba ukushisa okhula ongakwazi ukubhekana nokucindezeleka nobunzima ngokwakhe, usebenzise utshwala kalula, njengoba lokhu kubonakala sengathi kube nenhlalakahle.
Ngesinye isimo, lapho ukunakekelwa kwengane kubazali engekho, lapho ekhuliswe emgwaqeni futhi ebona ubuholi obungokwenkolo njengendlela evamile yokuziphatha, ukusetshenziswa kotshwala kuqala ukuqala indawo ebalulekile empilweni yakhe.
Izigaba zokuxhomeka kotshwala ezinganeni nasezingane
Isigaba 1 (sithatha izinyanga eziningana). Ingane ijwayele ukuphuza utshwala. Kulesi sigaba sokubaluleka okuyinhloko yinkampani emgwaqweni engavumelekile lapho ingane ihlala khona.
Isigaba sesi-2 (siphetha ngo-1 g). Efaniswa nokusetshenziswa kotshwala okuhleliwe enkampanini yokuphuza.
Isigaba 3 (kuze kube seminyaka eminingana). Ukwakhiwa kokuthembela kwengqondo kotshwala. Phakathi nalesi sikhathi, intombazane ayikwazi ukulawula inani elidakiwe, ukumelana nokuphuza ngokweqile kotshwala kukhula ngokushesha, okubhekwa njengombonakaliso wokuthuthukiswa kwesigaba sakhe sokuqala sokudakwa ngokweqile.
Isigaba 4. Sibonakala ngokubonakala kokukhipha (hangover) syndrome. Ezinganeni, ngokungafani nabantu abadala, lesi sifo asizinzile, kungakabiphi isikhathi, sibonakala kuphela ngezidakamizwa ezinkulu zeziphuzo ezidakayo.
Isinyathelo 5. Eyaziwa ngokuthembela ngokomzimba kwengane ekuphuzeni utshwala. Ngokokuqala ngqá, izimpawu zokwehluleka kwengqondo nokucindezeleka komzimba ziyabonakala. Ingane ingalawuleki, ihlambalaza, ayisenaso isithakazelo ekutadisheni, uyaphuma, ufeze inqubekela phambili, ngisho nalapho ezama ukulungiselela amakilasi. Phakathi nalesi sikhathi intsha ivame ukuzwa isidingo esiphuthumayo sokuphuza ngaphandle kokuthola imali ngesikhathi esisodwa. Khona-ke uthola indlela yokuphuma kwabathinteli njenge-acetone, ezinye izixazululo, uzama izidakamizwa, njll.
Ukwelashwa kwalabo bantwana kufanele kwenziwe eziklinikweni ezikhethekile, ngaphandle kwezidakamizwa ezindala. Ukuze kufezeke lokhu, imvume evumelekile yabazali babo (ababheki), kanye nokubandakanyeka kwabasebenzi ekamelweni lamantombazane, kuyadingeka. Kumele kuqashelwe ukuthi umphumela wokwelapha ubi kakhulu kunabantu abadala ngenxa yezizathu ezichazwe ngenhla.
Okufanele ukwenze uma umntwana enesifo samathumbu
Ukwelashwa kwe-enuresis yezingane
Isisindo esiningi ngokwezinkinga zemithi
I-intanethi - izuze noma ilimaze umfundi?
I-Granola ene-almonds kanye nama-chips amakhukhunathi
Ukuphumula kwesisindo u-Olga Kartunkova utshele ngokucacile ukuthi waphonsa kanjani ama-68 kilogram
Sihlobisa isayithi kahle nge-periwinkle
Imininingwane mayelana "nokudla okuyisihlanu"
I-Encyclopedia yentuthuko ye-fetal phakathi nokukhulelwa
Imenyu yetafula lonyaka omusha-2018 ngonyaka wenja
Ngini i-Palm Sunday 2016? Gubha ukungena kweNkosi
Indlela yokubhekana neqiniso lokuthi umfana othandekayo ukhululekile?
Amakhathuni ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-1 ubudala
Isaladi nge-arugula nama-strawberries